Myrdal Plantlamp dia jiro manokana amin'ny fampiasana anaty | Famoronana an-tserasera
Ny zavatra ataontsika dia endrika ary misy fotoana ahafahantsika tsy miteny intsony hevitra mahafinaritra avy amin'ny mpamorona toa an'i Emilia Lucht sy Arne Sebrantke avy amin'ny studio Studio We Love Eames, izay namorona jiro ahafahan'ny zavamaniry maniry eo amin'ny toerana rehetra.
Amin'ny fampiasana jiro LED fa tsy tara-masoandro mivantana, ny 'Myrdal Plantlamp' dia mahavita mamorona ecosystem maharitra anao. Io dia mamela azy hanahaka ny fizotry ny fotosintesis, ka tsy mila rano na karazana fikarakarana ianao amin'ny faran'ny andro.
Volavola mahavariana ho an'ireo izay miaina anaty toerana tery izay zara raha miseho ny hazavan'ny masoandro amin'ny andro ary toerana tianao anolorana ny main'ny zavamaniry noho ity jiro ity.
Raha ny marina, Emilia sy Arne dia tonga manokana niaraka tamin'io famoronana io mba hahafahan'ny olona izay mifindra any amin'ireo tanàna afaka mitondra zavamaniry miaraka amin'izy ireo izy ireo amin'ireny interiors ireny izay indraindray, noho ny toerana kely dia tsy manome tontolo mampionona izy io. Iray amin'ireo jiro azonao atao ny manana ny studio any amin'ny tanàna lehibe ary mamporisika anao isan'andro raha miasa any an-trano ianao raha izany no izy.
Ny Myrdal Plantlamp dia mety apetraka na aiza na aiza ao an-tranonao misaotra amina endrika roa samy hafa: ny iray izay mihantona amin'ny valindrihana ary ny iray hafa izay azo ampiasaina hametrahana azy eo amin'ny faritra fisaka toy ny latabatra fandriana na latabatra fisakafoana. Ny jiro amin'ny tany dia noforonina tamin'ny vera manokana manarona sy mitondra herinaratra, noho izany dia tsy ilaina amin'ny tariby lehibe ny tariby.
Miaraka amin'ireo fiasa tsy manam-paharoa ireo, Studio We Love Eames manantena ny hanampy natiora kely amin'ireo toerana an-tanàn-dehibe na aiza na aiza.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Jiro malina mamela ny zavamaniry maniry ao anaty trano tsy misy rano na tara-masoandro mivantana